Famantarana ny sakana karbaona manga manga honko - Hevi-dehibe ho an'ny mpanao politika - Blue Ventures
Famantarana ireo sakana karbônina manga honko – hevi-dehibe ho an'ny mpanao politika
Ny ala honko sy ny tontolo iainana karbôna manga hafa dia manome tombony betsaka amin'ny fanalefahana ny toetr'andro sy ny fampifanarahana, ary koa ireo tolotra hafa izay manohana ny fiveloman'ny morontsiraka. Na izany aza, ireo tontolo iainana sarobidy ireo dia very haingana, izay misy vokany manimba ny toetr'andro sy ny fiaraha-monina amorontsiraka.
Ny tetikasa karbaona dia afaka manangona vola amin'ny fiarovana sy famerenana amin'ny laoniny ny honko amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola momba ny toetrandro mifandray amin'ny fampihenana ny entona azo antoka sy azo antoka. Saingy amin'ny toe-javatra amorontsiraka, miatrika sakana ara-teknika, ara-bola ary politika izy ireo. Mila vahana maika ireo raha te-hanatontosa ny mety ho vitany amin'ny fisorohana ny krizin'ny toetr'andro ny tetikasa karbaona manga.
Nanomboka niasa tamin'ny ala honko sy karbaona manga ny Blue Ventures tamin'ny taona 2011 teto Madagasikara, nanohana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hamolavola fomba fiasa mifototra amin'ny fanentanana amin'ny fiarovana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny honko. Ankoatra ny fandresena ireo olana ara-teknika sy ara-bola isan-karazany, ity traikefa ity dia nanampy tamin'ny famantarana ireo sakana ara-politika. Ao anatin'ny tontolon'ny COP26, ny Blue Ventures dia mamoaka ity tatitra ity mba hanampiana ireo mpanao politika amin'ny fiantohana ny karbaona manga ho tonga amin'ny fahafahany ho an'ny olona sy ny natiora.
Sakana politika efatra lehibe no jerena:
Fitondrana tsy mazava sy tsy azo antoka;
Fizarana tombontsoa tsy ara-drariny;
Ny tsy fifandanjana eo amin'ny tetikasa karbaona manga madinika sy ny rafitra nasionaly REDD+; SY
Sarotra ho an'ny karbaona manga ao amin'ny Fifanarahana Paris sy ny fandraisan'anjaran'ny firenena (NDCs).
Blue Ventures Report, Politika fohy
Schneider, C., et al 2021. “Famantarana ireo sakana karbaona manga manga honko. Hevitra lehibe ho an’ny mpanao politika”. Blue Ventures, Bristol, Royaume-Uni.